Linux maforamu uye kutya | Linux Vakapindwa muropa
Kumwe kwekutya kukuru kupinda muLinux kuziva maitiro ekubata neforamu dzeLinux, vazhinji vanovatya uye vanodzivirira kutora kukwakuka nekunzwa kusurukirwa zvisati zvaitika. Linux maforamu anotyisa.
Sezvo iyo Internet yakauya mumaoko eruzhinji kuti maforamu aripo, uye pamberi pavo «BBS«. Kana izvo zvakagadzirwa muforamu iri nharaunda ine yayo mirawo uye ayo makodhi, izvo izvo zvitsva zvinonamatira zvinofanira kuita mune iyi nyaya zvinoenderana, uye kuchinjika hakusi nyore ... nekuti zvinoenderana nezvikamu zviviri, iyo nyowani linuxero forero uye vekare vashandisi venharaunda.
Iyo forum linuxer inowanzo ine maviri makuru maitiro eiyo ku tux klan:
Iwe unoda kuratidza ruzivo rwako nenzira inoshanda (Ndokusaka kune akawanda maLinux mablog ehunyanzvi hunhu kunyangwe hazvo usina kushata iwo pachawo unoshandiswa zvisina kunangana Shamisira)
Funga nezve mashandiro senzira yekupedzisira kwete senzira (Mushandisi weWindows anofunga OS svikiro).
Uku ndiko kutanga kwetsika kushamisika. Wepakati Linux mushandisi anofunga kuti kudzidza kubata iyo sisitimu yekushandisa kwakakosha uye zvakanyanya kuomarara iyo distro, zvirinani. Ikoko iyo ego inotamba chikamu chakakosha uye icho chiripo mumaforamu mazhinji.
Iyo yakasarudzika linuxer ku tux klan inoda kuenda kubva kune imwe distro kuenda kune imwe, nekuti, sekureva kwake, kuenda kubva kune imwe distro kuenda kune imwe, iyo inogara yakanyanya kuomesa kupfuura yapfuura, inodikanwa nekuti tinofanira kudzidza (achiratidza izvozvo zvose isu tinofanirwa kupfuura nenzira iyoyo). Ivo havaigona kuzviita pasina rubatsiro uye ndizvo izvo vazhinji vashandisi veLinux maforamu ari, kukwira zvigaro uye kugona kuyedza kuti ndiani ane iyo refu kupfuura.
Pakati pekurwa kweiyo egos ndeyekuti linuxer nyowani inosvika, iyo isina chekuita neiyi kurwa kweegos, iye anongoda chete kuita kuti system yake ishande, iyo mutyairi wekadhi rake pakupedzisira anoshanda, kuti Firefox yake ine flash, etc.
Kadhi rangu revhidhiyo harishande kwandiri muUbuntu
Asi iwe haugone sei kuziva, izvo zviri nyore kwazvo, dzorera kernel yako nemutyairi mutsva nv238556-i386.tar.gz.
Uye hapana imwe nzira iri nyore here? Ndiri mutsva.
Uyu bobuntu unotiunzira akachena mapenzi kuLinux
Paunodzidza kuGoogle zvakanaka, dzoka.
Ini handisi kuzoisa iyo Linux server nyowani nguva dzose seyakanaka uye nguva dzose yekare seyakaipa, kune zvakare kune nhaurirano dzinotyisa dzinokonzerwa newbies, asi nekuda kwehunhu.
Ini ndoziva yeLinux foramu (yeiyo yakatarwa distro) iyo inotsanangura iyo yakazara protocol yekudzidza kubvunza, ivo vanokukumbira kuti iwe uverenge neyakagamuchirwa email, vamwe vanozvifuratira uye vachitobvunza nekuzvitutumadza.
Nei paine pushy newbies?
Ichokwadi, vazhinji vashandisi veLinux vari kuisa chimwe chinhu panjodzi nekutsvaga Linux nekuiisa paPC yavo, mazhinji, ndinogona kutaura zvine chokwadi, vanoiisa panguva isiri iyo, vasina kuongorora zvakakwana uye vamwe vazhinji vanoiisa nekugovana PC nemhuri. nhengo uye ivo vanofanirwa kuratidza "kuti vanogona kuzviita" kana vanogona kuva nenguva yakaipa, vamwe havagovane asi vanonzwa kuti vamwe mumba mavo kana nharaunda vari kuvatarisa, semunhu anoenda kunoita hope dzeAmerica uye oita kwete kuda kudzokera kumba ndiri murombo. Uye vamwe vazhinji havana moyo murefu kubva pakuzvarwa zvekuti vanotadza kumira pachavo.
Iko kushushikana kwakaunzwa kumusangano weLinux.
Dzidzisa kuredza uye kwete kupa hove kure
Iyo uzivi hwevakawanda maLinux foreros, kunyanya iwo akasarudzika mune akaoma kana zvine mwero akaomarara distros, ndeyekuti vatsva havadi kudzidza uye kuda kuti zvese zvishandiswe. Dambudziko nderekuti iro rekuti server nyowani yeLinux haina maturusi ekuziva kuti uwane ruzivo rwakakosha kuti udzidze kuti zvekare zvine pachena, ndiko kuti, mushandisi weLinux wekare anongoda dzidziso yekuita chimwe chinhu chitsva kana iyo data kubva kushamwari, asi iyo nyowani ingangoda matatu ezvidzidzo uye pamwe mune imwe yadzo imwe kana imwe nhanho uko iyo yese inoshanda sisitimu kana chikamu chayo chinogona kutakurwa, semuenzaniso, kuti udzidze maitiro ekugadzirisa zvakare iyo system kuti uone mhedzisiro yeCompiz.
Iwe unofanirwa kudzidzisa kuredza, asi dzidzisa zvakanaka. Kana ndikakupa tsvimbo, hoko uye reel hazvikwani, pamwe Zvingave zvirinani kana iwe ukaona maitirwo andinoita nguva yekutanga ndichitsanangura nhanho imwe neimwe kubva pandinoisa tambo patsvimbo uye ndotsvaga nzvimbo chaiyo yekukanda hove dzaruma chirauro.
Ini ndinobvunza sei mumusangano?
Kana iwe uchizobvunza muLinux foramu, iwe unofanirwa kuve wakagadzirira kupindura mibvunzo kumashure.
Funga nezve izvo zvisina kunaka uye rangarira zvawakaita nguva pfupi yapfuura, chii chingadai chakakonzera dambudziko.
Google it kutanga. Chokwadi iwe unowana imwe kumashure iyo inojekesa dambudziko rako, asi zvinotora nguva (zvinoenderana nekuzivikanwa kwedistro uye kuti dambudziko rakawanda sei).
Kana pasina chinoshanda nemazvo, pinda foramu uye usati wabvunza, tarisa yako yemukati yekutsvaga injini yedambudziko rako kana mamwe matambudziko akafanana.
Chete kana pasina mhinduro (uchifungidzira kuti waedza zvese zvawakawana muGoogle zvinoshanda kuchinetso chako), zvitumire muforamu, uchitsanangura kanenge vhezheni yedistro, dhizaini (32 kana 64 bits) uye zvese zvinowana. nezve dambudziko nekusanganisira zvinongedzo kwawakawana zvinyorwa nezve chii chingave chiri kukonzera dambudziko rako.
Pindura zvese zvavanokumbira
Usatsamwe kana vasingakwanise kuwana mhinduro
Kana iwe ukatevera nhanho idzi uye uchiri kurapwa zvakaipa, iwe unogona kuva nechokwadi kuti yakanga isiri yako mhosva uye kuti inogona kunge isiri nzvimbo yakanaka yekugadzirisa zvinonetsa.
Ndeipi forum yeLinux inofanira kunge yakaita sekufunga kwako?
Linuxist elitism iri kuzopera?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » Linux maforamu uye kutya
Hongu Paulo, raive jee. Hechino chimwe:
Chii icho mukadzi anofanirwa kuisa munzeve dzake kuti akunde murume?
Asi, ingori imwe nzira yakatenderedza, kune vazhinji vashandisi vatsva vanga vachikumbira rubatsiro nekuti iye akakosha, vaishandisa maWindows pringaos uye vobva vati vanoenda nekuti havana kubatwa zvakanaka (kana kuti vane anga asiri mat rija).
Ehezve, kune vamwewo vanhu vanotenda kuti ndivo mapenguin gurus, asi kana ukamusiya kuti asangane neumwe wavo, zvaive pachena kuti waizomhanyira kuWindows pahurungudo yekutanga yawakasangana nayo.
Sezvandakaverenga imwe nguva mu blog:
Kana iwe ukabvunza mumaforamu 99% yevanhu vanokupindura ne "RTFM" (Verenga Iyo Fucking Chinyorwa), "tarisa murume", kana "tsvaga muGoogle".
Kuti udzivise izvo uye uchifunga izvo zvinotaurwa netsamba. Vashandisi veLinux vanozvifunga ... unofanirwa kutamba neizvozvo.
Saka hunyanzvi hwakanyanya kuenda kumaforamu uye utaure wakananga (semuenzaniso): "Linux inoyamwa nekuti haugone kuwana faira rakareruka seWindows". Nekukurumidza, iyo fan fan-vakomana vachakupindura, vakatsamwa, vachitsanangura inokurumidza uye inoshanda nzira yekuwana iyo faira.
Hameno. Ini handirambe kuti zvinotsamwisa kubvunza chimwe chinhu muforamu uye kuti vanokupindura mbichana, asi ichiri senge chipingamupinyi chaunofanirwa kupfuudza kuti uve mushandisi weLinux, nekuti muLinux unofanirwa kubata nemirairo, uye pamusoro pezvose nekutsvaga kwegoogle Saka kunzwisisa kuti kweLinux unofanirwa kuzvidzidzisa-pachako kunotora nguva. Ini ndinozviona zvakanyanya seyitmus test iyo inofanirwa kupasiswa, zvikasadaro, maforamu anofanirwa kunge achingoita hushamwari.
Zvakanaka, ini ndakatanga neUbuntu, ini izvozvi ndinoenda neOpenSuse, uye handisati ndambove nedanho rekutumira mumaforamu, sezvo ZVESE zvinowanikwa nekutsvaga mushe mugoogle .. ikozvino, kana iwe uri simbe, unoenda wakananga kuforamu.
idambe, handiti? uri kurevesa here?
hahaha maitiro ataurwa ne pacovr haana kushata xD.
Zvakanaka, hazvina kuitika kwandiri zvakanyanya seizvi, nekuti nekuda kwekuti ini ndinodzidza Computer Engineering, kuchikoro ndinoshandisa Linux mazuva ese, vanoshandisa Mandriva, ndipo pandakatanga kutora nhanho dzangu dzekutanga, nekufamba kwenguva ndakaisa iyo kumba, asi Mandriva Panguva iyoyo yaindipa marwadzo mazhinji, uye nechikonzero chimwe chete chekuti ndanga ndisingazive zvaiitika, mudzidzisi akakurudzira Ubuntu kwandiri, uye nekutenda kwaari ndakasvika pakuziva Ubuntu, nekuda kwe makirasi kuchikoro, ini handina kumbobvira ndambobvunza mumaforamu, kunze kwekunge ini ndatova neruzivo rwekutsvaga muGoogle, (panogara paine mushandisi ane dambudziko rako), asi ndinorangarira kuti ndinofanira kubvunza muforamu uye mimwe misoro haina aive nemhinduro, kupfuura kubva kuvashandisi vaive nedambudziko rakafanana, kuve iyo Kana matambudziko angu akange asiri zvinhu zvakapusa izvo nemurairo waizogadziriswa, iyo yandinorangarira zvakanyanya ndeye bhatiri rangu kuti pakanga pasina nzira yekuratidza kuchaja muzana, pakupedzisira inoita kunge sensor yakatofa.
Kuyedza kuyedzwa… ..
Ini yekukonana kwetsika chaiko. Idzi inzira dzakasiyana zvachose dzekunzwisisa kushandiswa kwepc. Uye dambudziko nderekuti vashandisi veLinux havana tsitsi dzinodiwa kuti vamire mune shangu dzemumwe munhu, kana newbies haagone kana fungidziro yekudzidza zvimwe zvinhu zvingangodaro zvisingakufarire zvakare muhupenyu.
Asi sekutaura kwandamboita, vanhu havafanirwe kudzidza kubva pc yavo, vanofanirwa kuishandisa kuita mabasa. Kana iwe uchida kudzidza kubva kwaari uye uve "musori" saka ndiyo sarudzo yako asi hapana mumwe munhu anofanira kuitakura. Iwe unofanirwa kunzwisisa kuti Linux ndeye yakanakisa OS ... yaani? Zvinoenderana, kana zvichikushandira kana kwete.
Ini kashoma kubvunza maforamu e linux asi kusvikira zvino handisati ndamboita madrama, mazhinji acho anopindura sekunge mhinduro yacho yaive chinhu chiri pachena kwazvo pasi, asi hazviitike
Ndiwo mutengo unogovaniswa ne "Kugovaniswa" sevari nyore. Vamwe vashandisi vanoita zvakanaka, vanowana 'zvakashata,' uye vamwe vanosvetuka pamusoro pemucheto wemhirizhonga.
Ubuntu (sezvawakaisa mumuenzaniso) ine yakakwira muzana yekugamuchirwa kwevashandisi vatsva, uye ndiwo marongero ainoita. Naizvozvo, ine chikamu chepamusoro chevashandisi "vakaita zvakanaka" mukufamba, uye inogadzirwa sekuchema kwe "hei, heino Operating System iyo kana ichishanda ...".
Ndinofunga wazvitaura, uye ndinoda kuzvisimbisa nekuti ndicho chakakosha pane zvese izvi:
Iwe unofanirwa kudzidza zvishoma usati wapinda muLinux, ive iri muForamu, mune manejimendi yeDistro kana mune ruzivo rwepfungwa dzeMunharaunda uye Mahara Software.
Kana pasina zivo yepamberi, zvinozonetsa kune avo vanoedza "kutanga uye kunyanya."
jejjej esty mhinduro ini ndinofunga ndiwo mabvi jqajjaaja kuseka kwakanaka
Iye zvino tichitaura nezvenyaya yakakomba, nhasi kune huwandu hweruzivo husingaperi hunovandudzwa mazuva ese zvine chekuita kwete kwete chete asi akawanda ma distros uye kutaura kubva pane zvangu ruzivo ndinotenda kuti ruzivo rwunotenderera nhasi maererano nemhinduro nemhinduro Nezve linux distros munda wandinogona kutaura nekutenda kuti linux yakunda
Zvakanaka, kukumbira mhinduro pane mac kana windows dzimwe nguva chimwe chinhu chinenge chiri chakavanzika chitendero iwe unofanirwa kumirira morpheo kukunyorera iwe kuburikidza nekoni senge mune matrix 1 uye kukuudza zvekuita zvaunotenda uye kwekutiza
Kune rimwe divi, muLinux mune zvese emahara emanyowani, magwara, anodzidzisa magazini, mhinduro muGoogle, mumaforamu, uye kunyangwe mumaforamu pane yepamutemo peji rega rega distro, tutorials pane ese maviri mablog uye YouTube, ndinoreva zero zvikonzero
Izvo zviripo senge zvinotaurwa neshamwari pano kuve nemoyo murefu, ziva mabvunziro uye chengeta mupfungwa kuti fomati kana kudzokera kumashure haisiyo mhinduro :)
@ N @ ty Zvakanditorera senge maawa masere kuti ndinzwisise komendi yako hahahahahaha
Ichokwadi kuti kune zvakawanda zvakashata zvakashata zvekubata vanhu vatsva zvakaipa. Pamusoro pazvose, inyaya yekuona pane akawanda mazita ezvinyorwa. Ndakairarama mumunhu. Asi zvakare ichokwadi kuti izvo zvavanowanzo gunun'una nazvo muzviitiko zvakawanda chinhu chakakosha kwazvo. Kune mamwe mavara ekuti kana vakakuudza, "verenga iyi mitemo kuti ugone kuita kuti hukama hwevanhu vari paforum huwedzere", uye kune vazhinji vakomana vanosvetuka vachienda kunopokana nazvo. Uye ivo shit kuteerera. Semuenzaniso, zvinoitika zvakanyanya mune ezvinyorwa zvekutumira izvo zvinowanzo kukuudza iwe, Mazhinji ematambudziko aunazvo uye mumwe munhu aive nawo. Uye chii chimwe, zvinopfuura chimwe kuzvigadzirisa. Uye ipapo iwe unosvetuka avo vasinga verenge shit uye wobvunza kuti riini vasati vangadai vakatsvaga. Vanhu ivavo vakarohwa zvakaipisisa. Asi ichokwadi kuti kugona uku kwekuda kuratidza zvavanoziva uye kwete kuzviisa mushangu yemunhu asina chaanoziva. Chinhu chakaoma kubata nacho. Asi hei zvinhu zvinhu zvakaoma kugadzirisa.
Iyo yakanaka posvo Fuentes, yakanaka.
Inoratidza chokwadi sezvazviri kubva kumaforamu mazhinji uye vashandisi vepamberi linux.
Ichokwadi kuti chipingamupinyi chekuti kune vasingakwanise kuverenga vanovaodza moyo ipapo uye vanokanda tauro, asi avo vanozvidzidzisa uye vanoda kudzidza chimwe chinhu chitsva vanoedza, ichokwadi kuti danho rekutanga kupinda muGNU / Linux Iyo iri nyore distro, nekushandisa iwe unowana chivimbo uye edza chimwe chinhu chakaomarara, asi ndizvo zvazviri, chinhu chekutanga kuputsa neyedu chipingamupinyi icho isu chatinounza kubva munyika ye windows nezvose zviripo, kunyangwe iri zvakare Ichokwadi kuti vazhinji vanongoda kushandisa komputa uye vasingazvizive asi iwo mukana wakanaka wekuwana izvo zvatinazvo pamberi pedu uye kuti vamwe vapenyu zvishoma havatibvambure vachiti ivo ndakakugadzirira iwe nyika nekuti hauna kuzviziva uye waive nehutachiona kana zvidiki zvinhu zvakadaro. maererano
Ini ndinofunga kwemavara ekuravira Mhando dzakasiyana mashiripiti eruzivo, uye foramu yega yega inogona kuita chimwe chinhu. Kana iwe uri newbie, pachave nemaforamu enewbies. Kana iwe uri enteradillo, zvino zvakafanana. Kana iwe uri guru kana uchida kuve, gamuchirwa kune gurublog.
Eee, ini handina kumbobvira ndanyorera kuforamu, kunze kwekunge ndatoedza zvese uye hapana imwe sarudzo, ini ndiri kunyanya kuzvitsvaga ini.
Zvakanaka, kana ndangonyoresa, ndinotora mukana uye nekupindura mibvunzo yevamwe, pese pandinenge ndine nguva, uye ndinopindura nepandinogona napo nekutsanangura zvese, nendima refu kwazvo, handisati ndamboudza chero munhu "RTFM", kwete.
weno ... ndanga ndichida kuyedza kwenguva yakareba, asi ndanga ndichigunun'una ... uye mazuva mashoma apfuura ndakatanga ... kuverenga ndakaona kuti chinhu chiri nyore pane ubuntu, saka ndakaitora, yangu hama yangu yakandikurudzira (ndakamuudza kuti afarire, (pasina ongororo yakawanda) KDE) Fox ndokuitora, tbn Kubuntu: D
uye mazuva ekupedzisira matatu kana mana ndanga ndichitsvaga pamaforamu ane mukurumbira (huya, uptdown, softonic: DDD) uye variko chaizvo varume vari kubvunza
"Ndakaisa ubuntu ndikaisa KDE neiri bhuku rekushandisa uye nei ikozvino richiti" Kubuntu "kana ini ndaisa" ubuntu "" hahaha ndakasekwa neaya mazwi: D, kunyangwe ivo vakandibatsira zvakanyanya, tumira mapeji manomwe kana kupfuura pane mukomana ane kukahadzika kwakawanda kusinga google, ipapo unozviona zvese pamwe chete: D
uye ndagadzira dhairekodhi rine mapeji akachengetedzwa, saka pandinoisa ubuntu, ini ndichavhura iwo mapeji ndotevera emanongedzera: D
saka pandinosunungura ndangariro kuti ndibve muchikamu (160GB yehard disk uye nekuedza mazuva ano ndakabuda 15GB zvishoma, dps ndinofanira "kucheka kopi" kusunungura chikamu (chidiki pane 35GB) saka ndine mazuva akati wandei ndichiri kuverenga xDDDDDD
Ini ndinoshandisa Chrome paWindows XP: S
pq inoti "safari paMac OS"
@vincegeratorix: Bhugi yekare kubva kune yekare plugin, ikozvino yagadziriswa;)
Yakanaka post. Muchokwadi, chimwe chezvinhu chakaita kuti ndide kuyedza Linux ndeye iyo poindi ye elitism iyo yakawanda yemaforamu ayo anobuda. Ini ndauya kuzoverenga zvirevo zvakaita sekuti "Linux ndeyevanhu vane hanya chete" kana zvisina maturo zvakadaro, uko kuri pachena kuti sisitimu yekushandisa yakakwira kusvika padanho rekushamisa rinokodzera chete vashoma ...
Hapana chingagone kuenderera mberi kubva pachokwadi, sekuratidzwa kwaitwa naJunta de Extremadura, uko marezinesi eMicrosoft akatsiviwa neLinux distro, kubva kuhurumende imwechete yedunhu, zvekuti izvozvi vese vakuru veExtremadura vanoshandisa Linex, zvisinei neyavo "senzwi remakomputa".
Linux iri pamusoro pezvose izvi: chakanakisa chishandiso chebasa, icho nerombo rakanaka chiri parutivi rweiyo OpenSource kufamba. Dai hunhu hwake chete hwaive halo yekufungidzira yavanomupa ipapo, zvaisazokosha, uye iyo Junta de Extremadura, kana mamwe masangano ehurumende, vangadai vakazviona senzira yakakomba kutsiva marezinesi eMicrosoft.
Makorokoto pachinyorwa ichi chakanaka.
Mhoroi, vakandiudza kuti kuUB vari kuenda kunopa kosi paLinux uye Christian Benvenuti achave mudzidzisi, akadaro capo panhau iyi, pane chero munhu anoziva chinhu? Ndinoonga chero ruzivo, Ndatenda
Kuchengetedza Kwemakomputa Madrid
Javier Enrique Carcamo Alfaro akadaro
Mhoroi, ini ndiri mutsva kuGNU / Linux, kunyange tech-savvy, ndine Asus Ryzen 5 ine AMD RADEON Vega graphic ... Ini parizvino ndine zvese Windows 10 uye Kubuntu yakaiswa uye zvinondipa mamwe matambudziko sezviri pachena kubva kumifananidzo Ndinonzwisisa. Mumwe munhu anoziva kana paine chero distro inoenderana zvakanyanya neangu maficha. Ndatenda
Pindura Javier Enrique Cárcamo Alfaro